SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 17, 2019 SBO GURRAANDHALA 17, 2019. Oduu, Bobbaa Dr.Abiyyii fi Obbo Lammaan Begiitti taasisanii fi haasaa ummata waliin godhan irratti hirmaataa tokko haasofsiisneerra. Kan biraas ni qabna.
Itoophiyaatu Bilisoome Malee Oromoo fi Oromiyaan Hin Bilisoomne; two historical maps were added and more to come Berhanu Hundeetin, Guraandhala 17, 2019 Dhugaa haa dubbannu yoo jenne, biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti jijjiiramni godhamee jira ykn godhamaa jira. Jijjiiramni… Read More »
Ethiopia’s Tefera breaks world indoor 1,500m record (Reuters) — Ethiopia’s Samuel Tefera broke the long-standing world indoor 1,500 metres record when he clocked three minutes, 31.04 seconds at the IAAF World Indoor Tour meeting in Birmingham, England on Saturday. BIRMINGHAM,… Read More »
Ethnic identification no longer compulsory in census 16 February 2019 By Dawit Endeshaw New ethnic, religious designations to appear on census (The Reporter Ethiopia) — Ethnic and religious identification is not compulsory in the upcoming Fourth National Census which is scheduled… Read More »